Izicwangciso eziQokelelweyo zeDatha zenza iiNtengiso zeNtlalontle zenqanaba leJedi | Martech Zone
I-Star Wars ichaza Amandla Njengento ehamba kuzo zonke izinto. UDarth Vader usixelela ukuba singayithatheli phantsi kwaye u-Obi-Wan uxelela uLuka ukuba ibopha zonke izinto kunye.
Ukujonga kwimithombo yeendaba zentengiso kwindalo iphela, kunjalo idata edibanisa zonke izinto kunye, inefuthe kubuchule bokuyila, kubabukeli, umyalezo, ixesha kunye nokunye. Nazi izifundo ezimbalwa zokukunceda ufunde indlela yokuwonyusa loo mandla ekwakheni amaphulo anamandla ngakumbi, anempembelelo.
Isifundo 1: Gxila kwiinjongo ezicacileyo
Ujoliso lwakho luchaza ubunyani bakho.
Ukugxila yeyona nto ibaluleke kakhulu kuyo nayiphi na iphulo eliyimpumelelo kunye nokungabikho koqwalaselo sesona sizathu sokusilela. Icacile, iinjongo ezinokulinganiswa zibalulekile kwaye zona ngeke misela ubunyani bakho.
Nje ukuba ukhethe injongo yomkhankaso, sebenzisa amanqaku edatha kwiwebhusayithi yakho kunye neziteshi zentlalo ukubona ukuba kuyafezekiseka.
Gxila kwinjongo yakho: Ukufumana iidilesi ze-imeyile ezili-1,000 XNUMX.
Hlaziya idatha yewebhusayithiNgokusekwe kwidatha edlulileyo, siyabona kuthatha abantu abangama-25 abatyelele le fomu ukufumana idilesi enye ye-imeyile.
Chonga iinjongo zewebhu: Ukuba abantu abangama-25 = 1 idilesi ye-imeyile, kuyakuthatha ukubetha okungama-25,000 kweli phepha lewebhu ukufumana iidilesi ezili-1,000 XNUMX ze-imeyile.
Yenza iimeko zentlalo: Uninzi lwamaqonga eentengiso zentlalo anezixhobo zokuqikelela ezibonisa ukubonakala okucingelwayo, ukucofa okanye ukuguqula. Faka uhlahlo-lwabiwo mali kwezi zixhobo ukuze ubone ukuba ukufikelela kwi-25,000 yewebhusayithi ukubetha kuyafezekiseka.
Vavanya kwaye ulungelelanise: Ukuba izikwere zakho zeenjongo kunye nohlahlo-lwabiwo mali, zilungile! Ukuba iphantsi, setha iinjongo ezizezinye okanye wandise uhlahlo-lwabiwo mali lomkhankaso.
Isifundo 2: Khetha iNdlela yakho ngononophelo
Uloyiko lokulahleka luyindlela eya kwicala elimnyama.
Baninzi abathengisi abathatha izigqibo ngokusekwe kwimbono yokuba ukuba abasasazi iintengiso zabo kubaphulaphuli ngokubanzi, baya kuphulukana nokhuphiswano. Ngokwenyani, ukufumana kunene Abaphulaphuli kufana nokufumana inaliti kwisitya segalactic kwaye idatha iya kukunceda ukuba ufikelele kubo ngokufanelekileyo nangeendleko.
Ngoku uya kuhlala unombono wabaphulaphuli ofuna ukubhengeza kubo, kodwa kuya kufuneka ukhethe elona xesha kunye nendawo yokufikelela kubo. Nantsi indlela yokuvumela idatha ithathe isigqibo:
Dlala kumandla wenethiwekhiInethiwekhi nganye yentlalo inamandla athile akuvumela ukuba ufikelele kubaphulaphuli ngeendlela ezahlukeneyo. I-LinkedIn, umzekelo, ilungile ekujoliseni isihloko somsebenzi, ke ukuba abaphulaphuli bakho njineli, unokwenza ngokulula ukwakha abaphulaphuli be-LinkedIn ukufikelela kubo. Nangona kunjalo, ukuba umkhankaso wakho ujolise kwitekhnoloji yobunjineli ethile (yithi ukukhanya kwesantya sokuhamba), unokufuna ukongeza ngeentengiso ze-Twitter ezikuvumela ukuba ujolise ngokusekwe kwiincoko abantu abanazo kule teknoloji kuba sele bezibandakanya kwesi sihloko .
Kwintengiso yoluntu, ubungakanani ntoni kungakhathaliseki: In Ubukhosi buhlasela Emva, uYoda uxelele uLuka ukuba "ubungakanani abubalulekanga”Kodwa kwintengiso, ubukhulu yinto yonke. Ngokubanzi, amachibi amakhulu abaphulaphuli avumela inethiwekhi yentengiso yoluntu ukuba ichaphazele ulwazi lwayo lwedatha algorithm ngokufanelekileyo ukunceda ekuchongeni abantu abanokuthi baphendule kwintengiso yakho. Abaphulaphuli abancinci banikezela ngedatha encinci kwezo algorithms, kodwa zibiza kakhulu kwaye zinokukunceda wenze izinto njengenkampani nganye okanye ukujolisa kumzi mveliso. Lonke iphulo lahlukile, ke ububanzi okanye incinci yomnatha ophosayo iya kwahluka.
Yenza abaphulaphuli bakhuphisane: Unokhetho oluninzi lokujolisa ekuhlaleni olubandakanya uluhlu lwabathengi esele likho, abaphulaphuli bokuzibandakanya kunye neenkcukacha zabantu / umdla. Ngoku kunokuba uthembele kwinqanawa enye ukuqhuba ibhlokhi yentengiso, sebenzisa slimmer, abaphulaphuli ekujoliswe kubo ngokuchasene kwaye unokumisela ukuba yeyiphi eyona isebenzayo kwaye emva koko ususe umkhombandlela kamva ngokusekwe kwintsebenzo.
Isifundo 3: Thembela kwiDatha, hayi kwiThamsanqa
Kumava am, ayikho into enjengethamsanqa.
IJedi iyavela lucky ngenxa yoqeqesho lwabo olunzulu kunye nokuzibophelela ekufundeni indlela yokuqonda ukuba leliphi inyathelo eliza kuthathwa kunye nendlela abazilungiselela ngayo kwi- Amandla bakhokela indlela yabo. Kwintengiso yemithombo yeendaba kwezentlalo, idatha idlala indima efanayo kuwo onke amanyathelo ohambo lwethu lwentengiso, isenza ukuba senze izigqibo ezifundisiweyo ezisekwe enyanisweni, endaweni yethamsanqa.
Ngoku indawo enkulu yokukhankasela kukumisela ukuba yeyiphi na ebonakalayo kunye nemiyalezo yokuyila eya kusetyenziswa ekuyikhuthazeni. Amaxesha amaninzi, oku kukhokelela kukungavisisani kwabasebenzi, kodwa idatha iyazisombulula. Nantsi indlela:
Misela umgca wokuqalaYonke into yoyilo kufuneka ihambelane nemigangatho yophawu, kufanelekile kumxholo ophakanyiswayo kwaye ulungiselelwe abo kujoliswe kubo. Vavanya oko kwakusetyenzisiwe kwixesha elidlulileyo ukuze ufumane oko kuya kusebenza kwixesha elizayo.
Vavanya yonke intoRhoqo, iibrand zizama ukucoca iphulo labo ukuya kumfanekiso omnye kunye nomyalezo. Ingozi kukuba xa iyasebenza, awunalo uluvo lokwenyani lokuba kutheni kwaye ukuba iyasilela, awazi ukuba ubekekaphi ityala. Endaweni yoko, vavanya ubuncinci beemifanekiso / iividiyo ezingundoqo ezine, iinguqulelo ezine zekopi yentengiso, iintloko ezintathu kunye neefowuni zokwenza izinto (ii-CTA). Ewe, oku kuthatha ixesha elide ukuseta, kodwa kubonelela ngedatha exabisekileyo apho izinto zisebenza khona kwaye ngoba.
Lungiselela yonke intoKudala zahamba iintsuku zokuseta-kwaye-kwaye ulibale-ngayo imikhankaso yentengiso yoluntu. Xa usungula, kuya kufuneka uhlalutye iimetrikhi zentsebenzo yonke imihla ngeveki yokuqala kwaye ubuncinci kabini ngeveki emva koko.
Susa imifanekiso engasebenzi kakuhle, imiyalezo okanye iintloko.
Uhlahlo-lwabiwo mali kwimifanekiso, imiyalezo okanye iintloko ezisebenza kakhulu.
Ukuba umkhankaso awusebenzi nje, yicime, uvavanye idatha kwaye uzame ukuyilungisa kunokuba uvumele uhlahlo-lwabiwo mali luphume.
Ukuba uqhuba unqakrazo oluninzi kodwa akukho mntu uguqukayo kwiwebhusayithi yakho, jonga iphepha lokufika- ngaba amandla kunye nomyalezo wentengiso uza? Ngaba ifom yakho inde kakhulu? Yenza utshintsho. Uvavanyo. Phinda umkhankaso wakho uphinde ubone ukuba uyayisombulula ingxaki.
Abaphulaphuli abamxinwa: Uninzi lwemikhankaso, abantu ekujoliswe kubo bangcwatywa kwiqela labaphulaphuli elibanzi (inaliti yakho kwi-galactic haystack) kwaye ngumsebenzi wakho ukudweba abantu. Enye indlela efanelekileyo yokwenza oko kukuphucula abaphulaphuli bakho ngokusekelwe ekusebenzeni.
Ukuba amazwe athile okanye amazwe awaphenduli, zisuse kwindawo yabaphulaphuli bakho.
Ukuba inani elithile labantu liphendula kumanqanaba aphindwe kabini kunawo wonke umntu, tshintsha uhlahlo-lwabiwo mali ukubaxhasa.
Sebenzisa abaphulaphuli bokuzibandakanya kunye nokwakha ukubukeka. Umzekelo, ukuba uqhuba umkhankaso we-Facebook usebenzisa ukuphinda ujonge iwebhusayithi, yenza abaphulaphuli ababandakanyekayo abamele abona bantu basebenzayo. Emva koko sebenzisa aba baphulaphuli ukwakha abaphulaphuli abakhangeleka ngathi kwaye uphucule iziphumo zakho nangakumbi.
Kwindawo emnyama sizifumana, kwaye ulwazi oluncinci lukhanyisa indlela yethu.
Imicimbi yolwazi kunye nemithombo yeendaba zentlalo iJedi, idatha ingumthombo wokwenene wolwazi. Khumbula ukuba idatha oyisebenzisayo xa useta amaphulo akho eendaba ezentlalo, ziya kuba ngcono kwaye ziqikeleleke iziphumo zakho.
Kwaye ngamana amandla angaba nawe, rhoqo.
tags: Obi Wan Kenobinokwandisaidabi leenkwenkwezi